Iindaba - Ukunyuka kwamaxabiso abaphumeleleyo be-API kwikota yesithathu kuye kwatsala umdla omkhulu
Ukuphuhliswa kwemveliso ye-API kunye noshishino lwamachiza ahlukanisekanga, kwaye ayingqinelani. Kuyaqondakala ukuba ngenxa yolawulo olungqongqo lokusingqongileyo, abavelisi be-API kufuneka bandise inkqubo okanye banciphise isikali semveliso phantsi kweemeko zantlandlolo, eziya kuthi zikhokelele ekunyukeni kwexabiso le-API. Ngapha koko, abavelisi bemichiza ekhulayo ye-API bajongene nengxaki efanayo. Ambalwa kuphela amashishini e-API anokuvelisa iimveliso ezithile, ezithi ngokufanelekileyo zenze imeko ye-oligopoly. Ukunyuka kwamaxabiso e-API kuya kuchaphazela namashishini ezonyango asezantsi ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Ngokweshishini, amaxabiso ezinto ezingafunekiyo ayenyuka, kwaye iinkampani ezixuba amayeza zihlala zikhala njalo, ezichaphazela ngokuthe ngqo amayeza ezigulana.
Umsebenzi kaZou pingming Xinghua likhonkco elinyukayo lemveliso yezamayeza, kwaye ukhathazeke kakhulu ngokwenyuka kwamaxabiso kwe-API. Kutshanje, kuye kwaxelwa ukuba ulawulo lwentengo kuLawulo lukaRhulumente lolawulo lwentengiso luye lwaphathisa i-China Chemical Pharmaceutical Industry Association ukuba iququzelele ingqungquthela ekunikezelweni kwezinto ezingafunekiyo kumashishini afanelekileyo ukuya kwigumbi lenkomfa loLawulo lukaRhulumente. Ukongamela imarike. Iinkokheli ze-supervision Bureau kunye ne-Anti Monopoly Bureau yoLawulo lukaRhulumente lolawulo lwezentengiso babenonxibelelwano olunzulu kunye nonxibelelwano nabameli bamashishini athatha inxaxheba kwiingxaki kwixabiso kunye nokuhanjiswa kwe-API.
Imichiza yeZouping Mingxing iya kulawula ukunyuka kwamaxabiso e-API ngaphakathi kwesakhelo semigaqo-nkqubo yesizwe kunye nemithetho yentengiso yehlabathi, ukuze kucocwe kwaye kuzinziswe imeko yentengiso zehlabathi.